Himalaya Dainik » ‘अन्तिम-संस्कार’ गरिएकी छोरी जब एक्कासी फेसबुक लाइभमा देखिइन्…
‘अन्तिम-संस्कार’ गरिएकी छोरी जब एक्कासी फेसबुक लाइभमा देखिइन्…
हालै एक अनाैठो घटना बाहिरिएको छ । एक युवतीको क’रणी पछि ह त्या गरिएको घ टनामा पुलिसले आ’रोपीको खोजी गरिरहेको थियो । पुलिसले आ’रोपीहरुलाई त भेट्टाएन बरु मा’रिएकी भनिएकी युवतीको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि पुलीस नै चकित पर्यो ।
सार्वजनिक उक्त भिडियोमा युवतीले आफू जी’वितै भएको बताएपछि प्रहरी नै चकित परेको हो । युवतीको भिडियो सार्वजनिक हुँदासम्म उनका परिवारले उनको अ न्तिम सं’स्कार गरिसकेका थिए । यो सन’सनीपूर्ण घ’टना बिहारको वैशालीको भएको भारतीय संचारमाध्यमहरूले खबर छापेका छन् ।
वैशाली जिल्लाको रहीमपुरमा गएको २२ अगष्टमा बाकरपुरका पिताले आफ्नी छोरीको ह राएको भन्दै पुलिसमा रिपोर्ट लेखाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट एक युवतीको श’व ब’रामद भयो । ला’शको प्रकृति हेर्दा उनको क’रणीपछि ज्या’न लि’एको आ’शंका गरियो ।
श’वको पहिचान मे’टाउनको लागि श’वलाई ते जा’बले ज ला’इएको थियो । श’व भेटिएपछि पुलिसले मु-द्दा दर्ता गरेर ह त्या’राको खोजीमा जुटेको थियो । तर यही बीचमा पुलिसले जुन मेनका नामकी युवतीको श’व ब’रामद गरेर घट’नाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो उनै युवतीले एक भिडियो जारी गरेर आफू जी’वितै भएको बताएकी थिइन् ।
पुलिसले पोस्ट-मा र्टम गरेर मु-द्दा दर्ता गरेको थियो । तर भिडियोमा युवतीले आफ्नै इच्छाले भा’गेर बिहे गरेको बताएकी छिन् । पिता र परिवारले झु-टो के’स बनाउनको लागि यस्तो गरेको उनलको आ’रोप छ। उनले घरमा पनि फोन गरेर आफू जी’वितै भएको बताएकी थिइन् तर परिवारले के-स गरेर अ’न्तिम सं’स्कार पनि गरिदिएको युवतीले बताएकी छन् ।
प्रेमी घाटमा जलिरहँदा प्रेमिकाको ‘शव’ बग्दै आएपछि…
आजको राशिफल: भदौ १७ गते, बुधबार
मेसी बार्सिलोना छाड्नुकाे यी १० कारण
माछामासुबाट हुन्छ यस्ताे फाइदा
बढ्न थाल्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी
कोरोना संक्रमित २ जना महिला सम्पर्कविहीन
इजरायलले ५ सय नेपाली कामदार लैजाने, मासिक तलब डेढ लाख
नेपालमा भयावह बन्दै कोरोना, एकैदिन २० जनाको मृत्यु पुष्टि
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या कति नाघ्यो ? जान्नुहाेस्
पोखरामा निषेधाज्ञा खुकुलोः के गर्न पाइने, के नपाइने ?
आफैंले लेखेको गीतमा वामदेव गौतमको ‘मोडलिङ’ (भिडियाेसहित)